�Panneaux solaires� angalarina eny Ampitatafika Amidy eny Anosibe sy Sakay Arivonimamo
Fongoriko ny kolikoly
Lisitry ny kolikoly
Taratasy hoan'i jean
Groupe Vidy Varotra Hanitatra ny orinasany any Afrika
Nankalazaina teny amin’ny hotely Carlton Anosy tamin’ny fomba manetriketrika, izay nafanain’I Bodo sy Rija Ramanantoanina, ny Tambour Gasy ary ny tarika mpanao soradia Dih’vin ny alarobia 18 aprily lasa teo ny faha 15 taonan’ny gazety Vidy Varotra; orinasa Malagasy, manao loha laharana ny foto-kevi-dehibe 4, dia ny asa fanaovan-gazety sy ny haino aman-jery, ny fanabeazana, ny teknolojia vaovaon’ny fifandraisana ary ny fisokafana amin’ny any ivelany ny “Groupe Vidy Varotra”.
Hamaky ny tohiny...
Fiaraha-miasa amin’ny FAO Tombony ho an’ny tontolo ambanivohitra
Omaly no natao tetsy amin’ny Hotel Carlton ny hetsika fampahafantarana sy fanaovan-tsonia ny tahirin-kevitra CPP (Cadre de Programation de Pays) momba ny fiaraha-miasan’i Madagasikara sy ny FAO (sampan-draharahan’ny firenena mikambana momba ny sakafo) manomboka ny taona 2018 hatramin’ny 2021.
Salon HR TROPHY Hanampy ny tanora mba hanana asa mendrika
Nosokafana tamim-pomba ôfisialy omaly etsy amin’ny garan’i Soarano hifarana anio zoma 20 Aprily ilay Salon HR Trophy andiany karakarain’ny World Trade Center sy ny “syndicat autonome des inspecteurs de travail” .
Kaontenera 1000 mihitsoka ao Toamasina Efa mamoaka fofona ireo vary lo
Nitsidika an’i Toamasina ny alarobia tapak’andro maraina ny praiminisitra niaraka tamin’ireo minisitry ny vola sy teti-bola, ny minisitry ny varotra sy ny fanjifana, ny minisitry ny fitaterana, notronin’ireo mpandraharaha sy ny mpitatitra ary ny ekipan’ny lehiben’ny faritra atsinanana.
Fanajariana ny tany eny Ampitatafika Antoky ny fampandrosoana ny kaominina
Nankatoavin`ny Fanjakana Malagasy, araka ny didim-panjakana nivoaka teo anivon`ny Filan-kevitry ny ministra ny alarobia 18 Aprily lasa teo, ny drafitra hanajarian`ny Tany na Plan d`Urbanisme de Détail (PUDé) ho an`ny lemaka ao amin`ny Kaominina Ampitatafika.
Ministeran’ny asa vaventy Fividianana fiara “4x4” miisa 25 ve no tena laharampahamehana
Nanolotra fiara miisa 25 ho an'ny Ministeran'ny Asa Vaventy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly maraina teny.
Fanjakana sy ny Katolika Vaky tanteraka ny ady?
Tsapa ho tratry ny antsojain’ny fanjakana Rajaonarimampianina ny fiangonana katolika, raha dinihina ny zava-niseho tato ho ato, izay toa manamafy ny efa nisy tany aloha. Mahatsapa ho tsy mahazo rirany amin’ity fiangonan-dehibe ity angamba ny fanjakana, ka toa miseho ny endrika antsojay na filam-baniny samihafa mivantana na ankolaka.
Fantatra ihany ankehitriny ireo olona mpandray ireo �panneau solaire� sy �batterie� halatra mandeha amin�ny herin�ny masoandro manjavona lava teny amin�ny lalana digue Ampitatafika mihazo an�i Fenoarivo.
Eny Anosibe sy any Sakay Arivonimamo no misy azy ireo izay efa arahi-maso akaiky. Taorian’ny nahatrarana ireo olona efatra tratra nangalatra ireo andrin-jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro teny Ampitatafika no nahafantarana izany ary efa nalefa any amin’ny fonjaben’i Tsiafahy, raha araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna Rado Ramparaoelina. Ny roa tamin’ireo dia tratra teo am-piakarana tamin’ny andrin-jiro mihitsy, raha nifanenjehana teny ambany kosa ny iray. Vokatry ny fakana am-bavany iretsy roa voalohany kosa no nahatrarana ny iray farany, izay marihina fa mbola tovolahy vao erotrerony avokoa. Voatery nanala ny jiro maty sy ny “batterie” tamin’ireo andrin-jiro sisa tavela, ny kaominina Ampitatafika vokatr’izany ary nampirina izany ao amin’izy ireo mba tsy ho lasan’ny mpangalatra intsony. Mikasika ny fikitihana tany ao anatin’ity kaominina ity dia nanambara ny Ben’ny tanàna fa tsy maintsy misy izany vao afaka manatsara ny tanàna ny tenany. Na Notsindriany fa tanin’olon-tsotra avokoa izy ireo ka miezaka mampifandray ny tompon’ny tany sy ny mpividy ny kaominina.
Réagissez sur l'article - 0 réaction(s)
Copyright 2009 Tia Tanindrazana